İpek Yolu'nun İlk Yük Treni5Kasım'da Marmaray'dan Geçecek | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ပိုးလမ်းမ၏ပထမအကြိမ်5ရထားသည်နိုဝင်ဘာလတွင် Marmaray ကိုဖြတ်ကျော်မည်
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 86 တရုတ်, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ပိုးလမ်းမကြီး၏ပထမဆုံး Yuk ရထားသည်နိုဝင်ဘာတွင် marmara တွင်ရှိလိမ့်မည်
တရုတ်ထံမှထွက် ထား. Marmaray တရုတ်မီးရထား Express ကိုသုံးပြီးဥရောပသွားပထမဦးဆုံးကုန်တင်ရထား, နိုဝင်ဘာလ5တူရကီရောက်ရှိမည်စီစဉ်ထားသည်။ China Railway Express သည် Transpaspian အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (TITR) မှတစ်ဆင့်တရုတ်နိုင်ငံမှ စတင်၍ ကက်စပီယံအကူးအပြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ China Railway Express နှင့်ဆိုင်သောရထားသည် Marmaray ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုမည့်ရထားဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Marmaray ဥရောပရောက်ရန်ပထမဦးဆုံးကုန်တင်ရထားအဖြစ်သမိုင်း၌အရပ်သို့ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်မှတဆင့်5ရထား, နိုဝင်ဘာလထဲမှာတူရကီရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ အဆိုပါရထား၏ကျမ်းပိုဒ်၏အသေးစိတျ, ကာဇက်စတန်မီးရထား Inc ကို (ktz) တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ Pavel Sokolov သမ္မတဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားဒုဥက္ကဋ္ဌ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးလီ Ihsan သင့်လျော်သောနှင့် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager ခရီးစဉ် Kamuran ပရင်တာအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
တရုတ်မီးရထား Express, Trans-ကက်စပီယန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (Trans-ကက်စပီယန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (Titanic)) တရုတ်ထံမှတူရကီမှနိုဝင်ဘာလ52019 အပေါ်ထွက်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အစည်းအဝေးအတွင်း China Railway Express အတွက်ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားကို Marmaray Tube Passage ကို အသုံးပြု၍ ဥရောပသို့ ဦး တည်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကာဇက်စတန်နှင့်တူရကီအကြားရထားလမ်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး volume ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အစည်းအဝေးထဲကရာ၌ BTK လိုင်း၏ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကောင်းသောဆန္ဒ၏ကိစ္စရပ်များအပေါ်သဘောတူ၏ဂီယာ၏ပြီးစီးမီးမောင်းထိုးပြ။
BTK မှတစ်ဆင့်ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည့်ပထမ ဦး ဆုံးကုန်ပစ္စည်းရထားသည် Sivas မှဖြတ်သန်းလိမ့်မည် 16 / 10 / 2019 တရုတ်မီးရထား Express ကိုများအတွက်နိုဝင်ဘာလ5အတွက် Marmaray ရောက်ရှိဖို့ရန်စီစဉ်ထားကြသည်ကုန်တင်ရထားကိုကျော် (Titan ဖြစ်ပါတယ်) တရုတ်ကက်စပီယန်ကနိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း "Trans-ကက်စပီယန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း" ပေါ်တွင် အခြေခံ. တူရကီအတွက်ကြိုဆိုအခမ်းအနားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ တရုတ် ...
အစ္စတန်ဘူလ်ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမယ့်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်မယ့် 24 / 10 / 2015 Izmir သည် Modern Silk Road ၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ mirzmir-Ankara YHT ကို Baku-Tbilisi-Kars မီးရထားဖြင့်ဆက်သွယ်ပါမည်။ İzmirသည်အပြောင်းအရွှေ့စင်တာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ AK ပါတီ Izmir လက်ထောက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ...
ဝန်ကြီး Turhan: "ပိုးလမ်းမကြီး၏ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် Revit မြင့်တက်" 28 / 11 / 2018 တူရကီအတွက်အကြီးစားစီမံကိန်းများနှင့်ဥရောပဖို့စင်္ကြံသူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့အစီရင်ခံချိတ်ဆက်ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက် (Lapis Lazuli) ကြီးမြတ်အားထုတ်မှုနှင့်အတူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
ဝန်ကြီး Turhan: "ပိုးလမ်းမကြီး၏ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် Revit မြင့်တက်"
သံပိုး Yolu`N ပို့ဆောင်ခံရဖို့ကုန်တင်၏ 50 သန်းတန်ချိန်အတွက်
သံပိုးလမ်းမကြီး 275 တန်ချိန်ထောင်နှင့်ချီသည်
Bursa မြန်နှုန်းမီးရထားဘူတာရုံနှင့်ရထားဘူတာနေရာများကွဲပြားမှုများ Mir?
အဆိုပါသံ Silk Road: ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကိုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရုရှားထံမှနေ့ 40 14 နေ့က